Izinwele zidinga ukunakekelwa nsuku zonke futhi izinga. Izinwele Mask "uLonda" libhekisela amathuluzi professional, kuyokunikeza izinwele ubungqabavu yakho, akhanye futhi ubuhle. Kanjani ukuyisebenzisa futhi lihluke kanjani kwezinye izindlela kwemikhiqizo izinwele ukunakekelwa?
Izinzuzo izinwele buso "uLonda"
ukunakekelwa ezinganele izinwele kubangela izinwele ukuze ezomile futhi ezingaphili. Buyela izinwele ukubukeka enempilo futhi zikanokusho kungaba imaski uLonda Professional. Ububanzi lokhu ejenti kuhlanganisa zinhlobo ezifana amafutha, ngoba nezinwele ezinde ibala, ezilimele futhi yomile.
abakhiqizi German ube ukwakheka ephelele imaski ngamunye. I umango amafutha noju kwanezelwa ukusiza uthuthukise izinwele futhi sinike ukubuka fresh. Isivuvu ngoba nezinwele ezinde ezinemibala ithuthukisa umbala walo, akhanye futhi ubuhle.
Izinwele, ngubani bavezwa wave zamakhemikhali, we panthenol wanezela, uwoyela alimondi nosilika akhiphe. izinwele mpilo kudingeka zondliwe. Ngo ezifana izinwele imaski ukwengeza ukwatapheya kakolweni lwegciwane. Ukunakekela kumele kube njalo.
Izinwele Mask "uLonda" amafutha
Isici esiphawulekayo thuluzi ngoba kuqinisa izinwele, ebenza okuqinile futhi unempilo. amafutha wemvelo, ezakha, uqinisa izinwele follicle. Ngemva izinwele izicelo zokuqala ithambe kakhulu futhi silky. Izinwele Mask "uLonda" kusiza inqubo ecwaninga.
izithako zemvelo ukuthi zifakwe umkhiqizo ekhishwe ngomyalelo iphephile ekhanda. ukusetshenziswa njalo imaskhi uyasondla izinwele umswakama, ekuthuthukiseni oyiyo. Kuyinto efanelekayo izinwele owomile nokukhumuzeka. Umthelela azobonakala ngemva isicelo sokuqala.
Ukuzifihla izinwele ezinemibala
Isici esiyinhloko leli thuluzi ukuthi kuthuthukisa isakhiwo curls, ngenxa izinhlayiya esiyingqayizivele ayingxenye ke. Usizo lwabenza imisenenzi Izinwele Mask "uLonda" kuqinisa ithoni ezinemibala izinwele, eside azigcina umbala waso bukhanye.
Ngenxa kuhlanganisiwe passion fruit akhiphe futhi lipids orange, ukuvala ngamunye elicwile amavithamini kanye amafutha. Umphumela isicelo kuyoba obonakalayo emva isicelo sokuqala. Izinwele umbala uyoqinisa, imicu ithambe kakhulu futhi wakwazi ukwenzeka.
Sebenzisa ukumanzisa izinwele.
Abamelana okungenani angu-10.
Hashaza ngamanzi afudumele.
Ukusebenzisa buso ikuvumela ukuba usebenzise conditioner for izinwele. isicelo avamile kwenza izinwele ukulawuleka, aqede ugesi.
Ngoba inwele ezilimele
Abesifazane abaningi ngokuvamile ukushintsha kwekhanda yabo. Kubangela umonakalo curls, okwenza zingabi manzi futhi ezingaphili. The Mask izinwele ezilimele "uLonda" lakhiwa cosmeticians German. Isebenzisa ukubukeka curls, abenze eziqinile kanye uyaphila.
Ukwakheka eyingqayizivele ivumela kusuka isicelo sokuqala ukugcwalisa zonke amaprotheni izinwele kasilika. uwoyela alimondi uthuthukise isikhumba nge amavithamini ikhanda futhi uvikele izinwele kusukela iziphi izici zangaphandle. Panthenol, oyingxenye, ayobuyisela kuyaqina futhi kwenza izinwele ethambile.
Kusho walisebenzisa kabili ngesonto. Sebenzisa massage ekhanda, kancane kancane lisabalalele izinwele zakhe. Labetibambile cishe imizuzu engu-10 futhi siyakazwe ngamanzi afudumele ukugijima. Usilika akhiphe lwezimpawu unwele ngalunye. Inikeza akhanye futhi kuyaqina.
Ikhambi for izinwele bushelelezi
Curls bathambekele babe ohlabayo. Izinwele Mask "uLonda" kuthuthukisa isakhiwo yayo, ibuyisa kukhanya okunempilo. Kushelele izindlela kufanelekile bonke abesifazane. It uyasondla izinwele futhi ivikela kusukela imvelo bangaphandle.
Ukolweni lwegciwane namafutha ukwatapheya, eziyingxenye yalesi imaski, nika curls kukhanye bese ubuyela kubo ubungqabavu. Kakade emva inqubo lokuqala, izinwele iyoba balalele futhi silky.
Ukuze ukubuyisela izinga izingidi, kusho esetshenziswa emva ayina zisebenzisa inqubo ukulungiswa kwananoma. Ngokushesha ngemva bushelelezi izinwele, babebiza esincane imaskhi futhi ugeze off.
Ukuze bazuze ukusetshenziswa izinwele buso, "uLonda", kubalulekile ukuba sisisebenzise. Imigomo yokusetshenziswa:
Kufanele uqale ugeze izinwele zakho nge imoto.
Sebenzisa buso manzi izinwele, ukuqalisa sezinwele.
Inombolo amathuluzi incike ubude izinwele, kodwa akufanele kube kakhulu.
Geza off the imaskhi ngamanzi ukugeleza efudumele ngaphandle kokusebenzisa conditioner.
Izinwele Kunconywa ithawula elimanzi ukuba yome ngokwemvelo.
Izikhiye anoma yiluphi uhlobo zidinga njalo. Ngaphansi kwethonya imvelo bangaphandle, isitayela kanye ploek ahlukahlukene, izinga yabo liwohloka, izinwele kuba buthuntu futhi ziyaqothuka. imikhiqizo ukunakekelwa Professional kuzosiza ukubuyisela izinwele enempilo ngifuna.
Girls bathi imaskhi aminyene ngokwanele, amaphunga ezinhle futhi wageza off. Bekubheka ukonga, nophiso ihlala isikhathi eside. Uphenyo Izinwele Ukuzifihla "uLonda" bathi izinga sivala kuyathuthuka emva isicelo sokuqala.
Hairstyle emva kokwelashwa ihlala isikhathi eside. Nezinwele ezinde kukhona shinier futhi abushelelezi. Obudaywe izinwele, ngokuvumelana amantombazane, babe ngokucace nakakhulu futhi moisturized. Iphunga imaski eshiya ngemuva ukugeza umzila lula futhi kujabulise. Izinwele ikamu kangcono hhayi nenkinga enkulu.
Abakhi imikhiqizo curls anakekele acabangele zonke izici isakhiwo sabo. ULonda imaski kuhlanganisa ingxenye izithako zemvelo ezisiza ukuthuthukisa ikhwalithi izinwele, ngibanike bukhanye xaxa futhi kukhanya iphile.
Isaga Russian mayelana yokwesaba: sibonelo esigqamile usulu lo wobugwala nesibindi luphakanyisiwe
Alexander Kuprin, "Shulamith": isifinyezo sezinto izahluko kanye nencazelo